यसरी प्रचण्डको कुर्सी गुम्यो ! « Pathibhar Online
यसरी प्रचण्डको कुर्सी गुम्यो !
काठमाडौं । ४ मंसिरमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र पार्टीको कार्यकारी अधिकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दियो । १३ पुषमा बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डको आसन फेरिएर अध्यक्ष ओलीसँगै राखियो ।
पहिले भने बीचमा अध्यक्ष ओलीमात्र बस्ने गरेका थिए भने प्रचण्डसँगै रहेको सोफामा अन्य सचिवालय सदस्यसँगै अग्र भागमा बस्ने गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड एक्लैकै अध्यक्षतामा एकपटक सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्यो ।
जब प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाए तब नेकपाभित्र विवादको श्रृंखला सुरु भयो । भैँसेपाटीको गोप्य बैठकपछि नेकपाभित्र अध्यक्ष ओली एकतर्फ र बाँकी अर्कोतर्फ रहेको स्पष्ट देखियो । त्यसपछि आएका बामदेव गौतम, एमसीसी लगायतका प्रकरणमा ओली र प्रचण्डबीच खटपट पार्टी विभाजनसम्म हुन्छ कि भन्नेसम्म पुगेको थियो ।
तर, बुधबारको सचिवालय बैठकमा पुन पुरानै दृश्य देखिएको छ । प्रचण्डको त्यो कुर्सी खोसिएर उनी पुन सोफामै आइपुगेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल उपस्थित नभएको अर्थपूर्ण सचिवालय बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय नगरेपनि प्रचण्डले एक स्पष्ट सन्देश पाएको पूर्वएमालेका कतिपय नेताको बुझाइ रहेको छ ।
यद्यपि बालुवाटार स्रोतले भने कुर्सी गुमाएको नभई ओलीलाई संक्रमण नहोस् भनेर तत्कालका लागि यो व्यवस्था गरेको दावी गरेको छ । ‘दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको र संक्रमण हुने खतरा रहेकाले चिकित्सकको सुझावमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा अलिक टाढा राख्न सो निर्णय गरिएको हो’, बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि कुर्सी हटाइएको विषय भने सचिवालय बैठकमा उठेन । बैठकमा सबै सदस्यलाई अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने नियम लगाइएको थियो । आठै जनाले मास्क लगाएका छन् भने सचिवालयले कोरोनाभाइरस रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।
बैठकले सफल मिर्गाैला प्रत्यारोपणको लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिएको छ भने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू र मिर्गाैलादातालाई धन्यवाद दिएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गरी एसईई परीक्षासमेत रोक्नेलगायत निर्णयलाई सचिवालय बैठकले स्वागत गर्दै प्रशंसासमेत गरेको छ ।
मिक्लाजुङको विपद् व्यवस्थापन कोषमा एकै दिन दुईलाख ५० हजार
मधुमल्ला । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा एकै दिन दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ
काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाललाई
राहत कोषमा सांसद कुशल लिम्बूको १ लाख सहयोग